Ukugwinya Tattoo: injongo
Namuhla, le nyoni kungabonwa hhayi kuphela esindizayo khulula ezivulekile, kodwa futhi kuboniswe izingxenye ezihlukahlukene zomzimba zabantu abafinyelela tattoo ngesimo amancane, izidalwa lejubane. Futhi "ukugqoka" yakhe kokubili amadoda nabesifazane babevela ohluke ngokuphelele ngokuphila nemibuthano kwamasiko. Swallow kungaba kuphela, noma iphakethe, noma kuhlangene nezinye izinto ongokomfanekiso. Lolu phawu sisanda zithandwa kakhulu futhi Yiqiniso, abaningi eyayigcwele ngokwami ukugwinya, kulandela imfashini hhayi ukuthi kazi usho ukuthini engcwele. Nokho, njenganoma iyiphi tattoo, tattoo umthamo kubaluleke kakhulu. Mhlawumbe ngizothola ukwazi ngaphambi kokuthi ukuhlobisa umzimba wakho iphethini ezinjalo.
Meaning of Tattoos emazweni ahlukahlukene
Ekuqaleni, le nyoni encane lifanekisela konke lihlotshaniswa unina endlini, umhlaba, umndeni, intsha kanye impetuosity. Emazweni ahlukahlukene ngenkonjane eyabiwe izici zayo ehlukile. EJapane, isibonelo, kwakufanekisela induduzo ekhaya, uthando lukamama nokunakekela. AmaShayina babe le nyoni samuntu ushintsho, kodwa omuhle, futhi kubonisa ezifana izimfanelo zomuntu njengoba ingozi, isibindi, kodwa ngesikhathi esifanayo, ukuqinisela nokuzinikela nekhaya lakhe futhi umhlaba. Ukuze yamaGreki asendulo umthamo kwaba samuntu kothando, ethunyelwe onkulunkulu emhlabeni. AbaseGibhithe, Sumerians nabantu engumKrethe wayekubheka njengelungelo prototype ye uMama oMkhulu.
Tattoo umthamo: ukubaluleka komphakathi okuqondene
Amatilosi imidwebo ngokwesiko abadumile kwezingubo zangaphansi isikhathi eside. Kuboniswe kubo emzimbeni njalo incazelo kanye zinokwaziswa emhlabeni oluthile mayelana umnini wayo. Basuke kubhekwe abasunguli tattoo umthamo, eyayintula zibaluleke ngokukhethekile kuzo. Akuwona wonke itilosi wayenalo ilungelo ukubeka ngokwayo phezu komzimba sibalo. Kwakuyilungelo we "nezimpisi" owathanda ngempela umsebenzi wakhe, ngivele kaningi on the esengozini yokufa nokuphila, iziphepho bebelokhu, Shoals, zamakhorali, ngokuvamile, kungenzeka uyazi bonke lobu bunzima futhi zasolwandle izintelezi ukuphila, kodwa sasingababonayo amandla beshesha futhi emincanyana njengoba lokhu okuncane birdie. Swallow nazo kolwandle, bathi, sikhathele siyingcuba yalolu hambo olude sushi isilinganiselo futhi unikeza ithemba ukuhlangana nomkhaya kanye emhlabathini ngokuqinile.
tattoo Swallow kuqakathekile nemibuthano neziboshwa zangaphambilini kanye zamanje. Ukuze abantu abeza tando ke zonke lezi zilo sifanekisela inkululeko oluseBhayibhelini ayesanda kuluthola. isikhathi Ukukhonza ukubona nenkonjane talisman ukuthi izabehlisela ushwele.
Enye okushiwo tattoo
Figure ngesimo umthamo ingaboniswa izingxenye ezihlukahlukene zomzimba: ngemuva kwendlebe, phezu amaqakala ngemilenze, emuva, isihlakala, ehlombe, nokunye. Kwendawo akuthinti ukubaluleka tattoo. Swallow futhi Asithi uhleli wedwa, iphakethe nge imbali e Uqhwaku noma isidleke. Ukwakheka zokugcina simele ekhaya, ukuzinikezela, ukunakekelwa kwabathandekayo. Swallow futhi kubonisa inhlanhla, impumelelo, wayesenalo ithemba nokholo. Namuhla tattoo umthamo, value okuyinto enezici ngakho futhi edidayo, ikakhulukazi lezi zilo sifanekisela intsha kanye swiftness esingokwemvelo, isivinini kanye impulsiveness endleleni abacabanga ngayo nabenza.
Izitolo "Lego" e Moscow, ikheli kanye metro station
Ama-bacterium namagciwane ngaphansi ngesibonakhulu (izithombe)
Ambivert - iyona kusho segolide noma ososayensi owasungula le umqondo?
"Zyklon B": wonke umlando, ikakhulukazi zamakhemikhali Izakhiwo
"Karmolis" (lehla): yokusetshenziswa, intengo, kanye nokubuyekeza of the ukulungiselela
I-Yakty-kul, iBashkortostan: incazelo, ukuphumula, ukudoba